Tantara : mpanoratra avokoa ny rehetra | NewsMada
Tantara : mpanoratra avokoa ny rehetra
Iray amin’ireo asa soratra saro-pady ny tantara. Boky maro no navoakan’ny vahiny momba an’i Madagasikara sy ny Malagasy, saingy hatramin’izao, mbola miteraka “adihevitra” maro izy ireny. Anke­hitriny, mpanoratra maro no te hanakorisa ny penina, hirakitra ny zava-misy iainan’ny Mala­gasy. Mba tsy hanimbana ny tantara, anefa, tsy tokony hanana firehana sy fiandaniana, atsy sy aroa izy ireny fa hametraka hatrany ny lanja amam-kasiny sy ny mety ho fiantraikan’ny asa soratra diso na nodisoana eo amin’ny fiainan’ny taranaka.
“Tsy voatery hisalotra ny anarana hoe: “mpanoratra” vao hahavita asa soratra mirakitra ny tantaram-pirenena”, hoy ny mpanoratra iray izay. Nohamafisiny fa “soraty na ho diary fotsiny aza aloa izay hitan’ny maso fa any andro any volana… Iny no hitondra zava-baovao ho an’ny taranaka any aoriana”.
Tsy mbola zatra azy io ny ankamaroan’ny Malagasy, hany ka miandry mpanoratra hamoaka boky foana. Izay voambara ao anatin’iny boky iny no hanaovana fandalinana, famakafakana, sns. Kanefa azo atao tsara ny miainga amina sora-tanan’ny teo aloha izay mbola tsy narafitra ho boky. Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa sandaina volabe ireny diary sy tahirin-tsoratra vita tanana momba ny tantara ireny any andafin’ny riaka!